waa maxay wasmo macaan - iftineducation.com
iftineducation.com – Marka gabar la guursado, oo lagu wargeliyo xiliga la guri geynayo, marna wey faraxdaa marna wey murugootaa, farxadeedu waa in ay nolosha kalinimo ka baxdey lamaane bog cusub nolosheeda u furana ay heshay (waa hadii jaceyl iyo raali ahaansho ay ku guursatey).
Sababtoo ah waxa ay gabadhu dooneysaa in ay waalidkeed iyo walaalaheed mar mar soo booqato ama iyagu soo booqdaan, isla markaasna qof walba ay gudoonsiiso hadiyad qaali ah, ayadoo muujineysa in ninka ay guursatey ay ku faa’iiday uuna yahay nin saqi ah, oo si fiican u daryeela iyada iyo ehelkeedaba. Hadaba gabadhu maalmaha malabka ee la isku cusub yahay waxey rabtaa qarash ka badan mid ay rabi laheyd bilooyinka caadiga ah, balse arinta in laga digtoonaado u baahan ayaa ah in gabdhuhu aad u xishoodaan marxalada nuucaan ah, ayagoo ka cabsi qaba in ay weydiisashada ay ninka wax weydiinayaan maalmaha koowaad ay ka tarjumeyso tuugsi soo deg degay, waxa ayna gabadhu ka warsugtaa in ninkeedu u garto waxa ay jeclaan laheyd inay hadiyado iyo casuumaad ka dhigto. Dhanka kale nimanka ayaa badankood gaar ahan kuwa aan guur soo marin waxa ay marxalada nuucaan ah iyaguna iska indha tiraan ahmiyada xaaska ayagoon qarash sidaas u badan siinin gabadha, maadaama ay isleeyihiin waa aroosad cusub oo banaanka uma baxeyso umana baahna inay kusoo adeegato qarash ka badan midka caadiga ah. FG: Waxaa jiri kara arimo kale oo badan oo habeenada arooska ay dumarku kala xishoodaan in ay raggooda ka dalbadaan, balse wareysi ay qurbo.net la yeelatay haween badan oo qibrad u leh arimahan ayey qodobkan ugu xulatay inuu yahay qodobka ugu badan una baahan in la fahmo ee dumarki la wareystay isku raaceen.
qaabka loo waso naagaha